Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Fraport AG: ny fidiram-bola sy ny tombom-barotra amin'ny taona 2020 dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fihenan'ny COVID-19
Frport AG: ny fidiram-bola sy ny tombom-barotra amin'ny taona 2020 dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fihenan'ny COVID-19
Ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia mametraka fepetra mifanohitra be mba hampihenana ny vidiny
Fraport AG dia nilaza fa ny fitohanan'ny fifamoivoizana dia miteraka vokatra ratsy ateraky ny vondrona
Fraport dia nandray fepetra isan-karazany amin'ny ambaratonga rehetra mba hampihenana ny vidiny ao anatin'ny areti-mandringana Covid-19
Fraport dia nanamarika fa nampihena ny fandaniana amin'ny fandidiana efa ho ny ampahatelony
Nandritra ny taom-piasana 2020 (nifarana tamin'ny 31 Des), ny valanaretina Covid-19 dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fanatanterahana ara-bola ny orinasam-piaramanidina Fraport. Noho ny fivezivezena mafy nataon'ny mpandeha, na tao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt na manerana ny seranam-piaramanidina misy ny vondrona manerantany, ny fidiram-bolan'ny vondrona dia nihena mihoatra ny antsasaky ny fe-potoana nitaterana. Ny valin'ny Vondrona (tombom-barotra net) dia nidina voalohany tany amin'ny faritany ratsy tao anatin'ny 20 taona, nahatratra ny € 690.4 tapitrisa na kely aza - na eo aza ny fepetra fitehirizana lafo.
Fraport AGNy talen'ny birao mpanatanteraka, Dr. Stefan Schulte, dia nilaza hoe: “Mijery taona lasa sarotra be isika 2020. Tsy toy ny ankamaroan'ny indostria hafa, ny fiaramanidina dia tratry ny areti-mandringana Covid-19. Na eo aza izany dia mahita ny hazavana amin'ny faran'ny tionelina isika izao. Ny fanolorana ny programa fanaovana vaksiny sy ny fisian'ny safidy fitiliana betsaka kokoa dia manome ny fepetra takiana amin'ny fivezivezena amin'ny rivotra - manomboka faran'ny fahavaratra izao. Ny olona dia te-hitsangatsangana indray, raha toa ka vonona ny hampiakatra ny fahaizany ireo kaompaniam-pitaterana. Mandritra izany fotoana izany dia nanamboatra ny orinasanay ho lasa mahia sy mailaka kokoa izahay. Noho izany, hipoitra matanjaka kokoa noho io krizy manan-tantara io isika. Amin'ny maha mpandraharaha ny Seranam-piaramanidina Frankfurt foibe manerantany ary noho ny seranam-piaramanidin'ny Vondronay manerantany, dia miorina tsara izahay mba handray soa feno amin'ny fandefasana ny dia an-habakabaka, raha mbola mijanona tsara kosa ny fomba fijerintsika ny fitomboana maharitra. ”
Ny fikatsoan'ny fifamoivoizana dia miteraka voka-dratsy ateraky ny vondrona
Tamin'ny taona 2020, ny fifamoivoizana nataon'ny mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) dia nidina 73.4 isan-jato isan-taona ho an'ny mpandeha 18.8 tapitrisa. Ny isan'ny mpandeha dia nidina marobe ihany koa tao amin'ny seranam-piaramanidin'ny Vondrona Fraport manerantany, ary ny fihenan'ny isan-jato dia nisy 34% tao amin'ny seranam-piaramanidina Xi'an any Shina ka hatramin'ny 83 isan-jato tao amin'ny Seranam-piaramanidin'i Ljubljana any Slovenia. Mifanaraka amin'izany, ny fidiram-bolan'ny vondrona dia nihena 54.7 isan-jato isan-taona hatramin'ny € 1.68 miliara. Ny fanitsiana ny vola azo amin'ny fananganana mifandraika amin'ny fandaniam-bola capacitive amin'ny zanaky ny Fraport manerantany (mifototra amin'ny IFRIC 12), ny fidiram-bolan'ny vondrona dia nidina 55.4 isan-jato hatramin'ny 1.45 miliara.
Ho valin'izany, Fraport dia miharihary fa nampihena ny fandaniana amin'ny fandidiana (misy ny vidin'ny akora, ny fandaniana amin'ny mpiasa ary ny fandaniana amin'ny fandidiana hafa) efa ho ny ampahatelony, taorian'ny fanitsiana ny fandaniana fanampiny ho an'ny fepetra fampihenana ny mpiasa. Izany dia nahafahan'i Fraport nahatratra EBITDA somary tsara (alohan'ny zavatra manokana) mitentina 48.4 tapitrisa € amin'ny taom-piasana 2020, nihena 95.9 isan-jato isan-taona. Rehefa nihevitra ny fandaniana fanampiny 299 tapitrisa € ho an'ny fepetra fampihenana ny mpiasa, ny vondrona EBITDA tamin'ny taona 2020 dia latsaka hatrany amin'ny 250.6 tapitrisa € (2019: 1.18 miliara €). Ny vondrona EBIT dia nidina hatramin'ny € 708.1 tapitrisa (2019: € ​​705.0 tapitrisa), raha ny valin'ny Vondrona (tombony net) dia nahatratra € 690.4 tapitrisa (2019: 454.3 tapitrisa €).
Nihena be ny vidiny sy ny fampiasam-bola
Fraport dia nandray fepetra isan-karazany amin'ny ambaratonga rehetra mba hampihenana ny vidiny ao anatin'ny areti-mandringana Covid-19. Amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny fandaniana tsy ilaina amin'ny asa, Fraport dia mitahiry vola ho an'ny tsy mpiasa (ho an'ny fitaovana sy serivisy) eo anelanelan'ny € 100 tapitrisa ka hatramin'ny € 150 tapitrisa isan-taona. Mandritra izany fotoana izany dia nampihena na nanafoana fampiasam-bola marobe i Fraport, indrindra fa ny toby fonenany Frankfurt - ka nampihena ny fandaniana vola mitentina € 1 miliara ho an'ny antonony sy maharitra. Fraport dia manohy ny fanamboarana ny Terminal 3 vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt hahatrarana ny fangatahana maharitra. Na izany aza, ny fe-potoana hanaovana ny terminal vaovao dia nitarina. Terminal 3 - misy ny trano lehibe misy an'i Piers G, H ary J - dia kasaina hampiasaina amin'ny 2026.
Orinasa marefo sy mailaka kokoa
Ho fanampin'ny fepetra fitehirizana vola ary misy vokany eo noho eo dia nanomboka nanamboatra ny orinasam-pandraharahana ankapobeny sy ny firafiny i Fraport mba hahatonga ny orinasa ho mahia sy ho mailaka kokoa. Ity fanitsiana ity dia misy fepetra 300 mikendry ny fampivoarana ny fizotrany, ny fanangonana ny fonosana ary ny famoronana rafitra orinasa marefo sy malefaka kokoa. Amin'ny lafiny ara-tsosialy, Fraport dia hanapaka asa 4,000 amin'ny ankapobeny amin'ny faran'ny 2021 - ka hampihena ny vidin'ny mpiasa hatramin'ny € 250 tapitrisa raha oharina amin'ny 2019. Manodidina ny 2,200 ny fihenan'ny mpiasa efa nomanina no efa tontosa nandritra ny taona 2020. Ho fanampin'izany, ny sasany Mpiasa 1,600 no nanaiky ny hamela ny orinasa ao anaty programa redundancy misy fonosana fisarahana, tetika fisotroan-dronono aloha ary fepetra hafa. Ny fihenan'ny mpiasa bebe kokoa dia ho tratra amin'ny alàlan'ny fiovaovan'ny mpiasa mahazatra.
Fraport dia hanohy hiasa drafitra miasa mandritra ny fotoana fohy (programa Kurzarbeit any Alemana) miaraka amin'ny tanjona hampihenana vonjimaika ny volan'ny mpiasa. Hatramin'ny tapany faharoa amin'ny taom-piasana 2020, manodidina ny 80 isanjaton'ny mpiasa ao amin'ny orinasa ray aman-dreny Fraport AG sy ireo orinasa lehibe ao amin'ny Vondrona ao Frankfurt no niasa vetivety. Izany dia misy fihenan'ny salan'isa eo amin'ny vanim-potoanan'ny asa manodidina ny 50 isan-jato refesina amin'ny resaka ababab
le ora. Ny tetik'asa miasa mandritra ny fotoana fohy dia manome an'i Fraport ny fahafaha-manao ilaina hananganana haingana ny haavon'ny mpiasa raha vao mihemotra ny fifamoivoizana.
Nitombo ny tahiry fitantanan-drakitra Fraport
Fraport dia nanangona $ 2.9 miliara ho famatsiam-bola fanampiny nandritra ny taom-piasana 2020. Miaraka amin'ny vola mitentina € 3 miliara, misy ny trosa arahin'antoka ary ny famatsiam-bola hafa, tsara toerana ny orinasa hiatrika ny krizy ankehitriny ary hanao ny famatsiam-bola ilaina amin'ny ho avy. Fraport dia hanohy hanararaotra ny tsenan'ny renivohitra mba hitazomana ny tahan'ny taha-bola avo lenta.
Ho an'ny taom-piasana ankehitriny, ny birao mpanatanteraka ao Fraport dia maminavina ny fifamoivoizana ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt manomboka amin'ny 20 tapitrisa ka hatramin'ny 25 tapitrisa ny mpandeha. Ny fidiram-bolan'ny vondrona dia antenaina hahatratra € 2 miliara amin'ny 2021. Ny orinasa dia maminavina ny vondrona EBITDA eo anelanelan'ny € 300 tapitrisa ka hatramin'ny € 450 tapitrisa. Vondrona EBIT dia antenaina fa hisy vokany ratsy kely, ary ny valin'ny Vondrona (tombony net) dia hijanona ao amin'ny faritany ratsy ihany koa. Ny roa amin'ireto mari-pamantarana lehibe ireto dia tena hihatsara raha oharina amin'ny taona 2020. Raha jerena ny fiantraikan'ny areti-mandringana Covid-19 sy ny valin'ny Vondrona ratsy andrasana dia hanome tolo-kevitra ho an'ny Birao Mpanara-maso sy ny AGM ny birao mpanatanteraka Fraport. amin'ny ara-bola 2020, tsy hizara dividend amin'izao taom-piasana 2021 izao.
Princess Cruises dia nanitatra fiatoana fitsangantsanganana an-tsambo avy any Seattle hatramin'ny 27 Jona